Voters in Zimbabwe go to the polls for a general election.
Sources: Sun Daily
Zimbabwe reports its first cases of the Lineage B.1.617 variant. The variant had been detected among a group of people in the central town of Kwekwe after a student returned from India on April 29.
President Emmerson Mnangagwa announces a slight easing of the lockdown in Zimbabwe amidst a decline in the number of COVID-19 cases. Intercity travel is resumed, and small and large businesses have been allowed to reopen.
The Reserve Bank of Zimbabwe announces that, effective immediately, foreign currencies such as the United States dollar or South African rand will no longer be legal tender in the country, and that any use of foreign currency within Zimbabwe will be a punishable offense.
Morgan Tsvangirai, opposition politician in Zimbabwe, dies of colon cancer at the age of 65, only months before a presidential election.
The president of Zimbabwe, Robert Mugabe, is awarded the Confucius Peace Prize, sometimes characterized as a Chinese alternative to the Nobel Peace Prize.
Zimbabwe's Movement for Democratic Change files papers with the Constitutional Court in Harare arguing that the recent elections be annulled because of widespread allegations of illegalities and intimidation of voters by Robert Mugabe's ZANU–PF party.
Robert Mugabe is declared the run-away winner of Zimbabwe's controversial presidential election by a 61% majority, extending his 33-year rule.
The Zimbabwe Electoral Commission says that Robert Mugabe's ZANU-PF party has won 142 seats of 210 seats in the general election.